Unboxing Doogee mix na ihe ijuanya !! | Gam akporosis
Unboxing Doogee mix na ihe ijuanya !!
Na-abịa site na mba nke nnukwu mgbidi China na-abịa akụkọ kachasị ọhụrụ site na Doogee, nke Doogee gwakọtara, ama mara mma nke maka ihe dị ka euro 150 na-enye anyị a mara mma imewe na-enweghị okpokolo agba, ogo mechara nke nwere ike ịbụ nke njedebe kachasị elu, yana ngwaike dị ike nke na-eme ka ọ dị mma maka ndị ọrụ gam akporo ọ bụla.
Na nke a Unboxing Doogee ngwakọta, na mgbakwunye na ịga na kpochapụwo njedebe nke ọnụ, anyị na-elekwa ya anya nke ọma iji nye gị echiche mbụ m tupu ịmalite ịga n'ihu nyocha vidiyo zuru ezu, nyocha m ga-eme mgbe otu izu gachara ma ọ bụ ụbọchị iri nke iji kpụ ọkụ n'ọnụ dị ka ọdụ m.
1 Nka na ụzụ nkọwa nke Doogee Mix
2 Mmetụta izizi nke Mixgee Mix
3 Final Iju, want chọrọ ka anyị raffle a Doogee Mix?
Ihuenyo 5.5 "SuperAMOLED nwere mkpebi HD 1280 × 720 pikselụ na njupụta nke 294 dpi
Atụmatụ ndị ọzọ Accelerometer - Mmetụta ike ndọda - P ihe mmetụta - G ihe mmetụta - kompas - Gyroscope - Ihe mmetụta Geomagnetic - Ihe mmetụta Sensor Ambient - Mkpịsị aka na-agụ na ihu - Ndenye Nchaji 2.0
Mmetụta izizi nke Mixgee Mix
Na enweghị ule nke ọnụ ahụ n'ime izu a na-esote ụbọchị iri, Doogee Mix bụ ngwụcha nke na - eme ka ị daa n'ịhụnanya ozugbo i wepụrụ ya igbe ya ma hu ihe mara mma nke ngwụcha nke nwere ogo dị elu na agba agba Blue nke na-enye ya mmetụ nke ezigbo njedebe dị elu.
Ndị mbụ a na ezi mmetụta Ha na-abanye na crescendo ka anyị na-elekwu anya na ngwụcha nke Mixgee Mix ha na-eru ebube ha kachasị elu mgbe anyị mechara gbanye ncha ihu ya wee hụ ihuenyo mara mma ma na-emesapụ aka na-enweghị okpokolo agba n'akụkụ ya na elu nke ọnụ ya. Fọdụ mmata izizi m chọrọ iji mesie ya ike, na awa ndị mbụ a jiri ha bụ ihe kachasị mma m nwere ike iche n'echiche m kachasị mma, nke a ọbụlagodi nwere ihuenyo na-anọ na mkpebi HD.
Cheta na m na-ekwu ihe a niile site na iji awa ole na ole jiri ọdụ anyị ga-echere ịhụ nyocha zuru ezu nke Doogee Mix, nyocha dị omimi nke m ga-eme n'ime ihe dị ka otu izu ma ọ bụ ụbọchị iri.
Final Iju, want chọrọ ka anyị raffle a Doogee Mix?
Ka m na-ekwu na vidiyo na m hapụrụ gị n'aka nri nke mmalite nke isiokwu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ka ụyọkọ nke Doogee Mix ahụ mee, ị ga-agafe vidiyo nke Iwepu Dogee Mix site na ịpị otu njikọ a, denye aha na Androidsisvideo vidiyo vidiyo, mee ka mgbịrịgba ahụ nweta ozi na-akpaghị aka nke vidiyo ọhụrụ etinyere na ọwa na nke kachasị mkpa, nye ya Udiri nke Unboxing nke Doogge Mix.
Inye bọtịnụ dị ka ọnọdụ dị mkpa ebe ọ bụ na anyị na-ajụ gị 1000 amasị maka nke a Doogee Mix ga-afụ ụfụ n'etiti otu n'ime ndị debanyere aha na vidiyo vidiyo nke Androidsisvideo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Unboxing Doogee mix na ihe ijuanya !!
Mara mma ekwentị. Enweghị m ike ịzụta ya n'ihi na enweghị m ego hehe.
3 Ngwungwu nke akara ngosi efu a kwụrụ ụgwọ na mbụ. Gbaa ibudata ha, onyinye a agafeela !!